Izindaba - Yini iyunithi yamandla wokubacindezela
Iyunithi yamandla wokubacindezela (i-HPU) isetshenziswa njengedivayisi yokuhambisa uwoyela, exhunywe kumasilinda amaningana we-hydraulic ngohlelo lwamaphayiphi wangaphandle ukulawula ukwenziwa kwamaqoqo amaningi wama-valve.
Ithangi likaphethiloli, ipompo kaphethiloli nedivayisi yamandla kagesi zakha uhlelo lomthombo kawoyela ovaliwe ozimele. Isiteshi sikawoyela singahlonyiswa ngohlelo lokulawula lwe-PLC, olulawula yonke imisebenzi yangaphakathi ye-hydraulic futhi lukhiqize amasiginali futhi lilawule ithangi likawoyela, impompo kawoyela nedivayisi yamandla ka-fan ukwakha uhlelo lomthombo kawoyela ovaliwe ozimele. Isiteshi sikawoyela singahlonyiswa ngohlelo lokulawula lwe-PLC, olulawula yonke imisebenzi yangaphakathi yokubacindezela futhi lukhiqize amasiginali nezilawuli.
Ngaphansi kwezimo ezijwayelekile, iphampu kawoyela ihambisa uwoyela kusistimu, igcina ingcindezi elinganisiwe yohlelo, futhi ibone umsebenzi wokubamba i-valve kunoma yisiphi isikhundla ngokuvimba i-valve yokulawula: esimweni sokusebenza, i-hydraulic actuator ilawulwa yi-solenoid valve kanye nesignali yomyalo wesistimu Sebenzisa i-solenoid valve ukulawula ingcindezi kawoyela nokukhululwa kwamandla kwe-accumulator, bese ulawula i-oil cylinder slide valve, ushayele i-valve ngenqubo yokudlulisela ngomshini, bese usebenzisa ukuvala okusheshayo, ukuvula okujwayelekile nokuvala nokulawulwa kokuhlolwa.
Isilinda esinengcindezi ephezulu singalungiswa esiqwini se-valve noma sisetshenziswe ngqo njenge-actuator. Uwoyela osindayo wokubacindezela ubuyiselwa esiteshini sikawoyela wokubacindezela, ukuze uhlelo lwamapayipi lusebenzise ipayipi elilodwa lokubuyisa uwoyela ukulawula ipayipi elithile elixhunywe ngokufana. Lesi siteshi se-hydraulic esinobuchwepheshe obukhethekile be-drive sisetshenziselwa ukulawula ukusebenza kwe-valve enkulu ye-steam kanye ne-actuators yohlelo lokudlula i-turbine bypass system.
Iyunithi yamandla yenzelwe izimo ezahlukahlukene zokufaka isicelo, ngokwesibonelo, ingasetshenziswa emalolini asebenza ezindaweni ezinzima, noma isetshenziselwe izimo zokuphatha umsebenzi osindayo wesikhathi eside, nezinye izikhathi ezidinga imikhiqizo esebenza kahle futhi esezingeni eliphakeme.
Umphumela uba yipulatifomu ehlukahlukene ngokweqile, kusetshenziswa izinto ezijwayelekile, ezingabhekana nezimo eziningi zezicelo ezidingwa yimakethe. Ukuqoqwa kwamakhasimende kwezakhi ze-hydraulic kuncishiswe ngezinga elincane, futhi umthwalo womsebenzi wemiklamo engajwayelekile wehlisiwe kakhulu. .
Iphinde yehlise kakhulu umthwalo wokuklama ongajwayelekile. Isibonelo, iyunithi yamandla we-HE yakhiwe kungxenyekazi enhlobonhlobo. Usayizi wemoto ovumelekile usukela ku-80 kuye ku-132mm (0.3 ~ 4.5kw), kanye nokufuduswa kwepompo kusuka ku-0.24 kuye ku-5.7cc. -Iyunithi yamandla ingalawula amasilinda ama-4 wokubacindezela. Ingxenye eyinhloko yohlelo yi-adaptha. Kunemininingwane emibili ehlukile. Inezimo ezahlukahlukene nezindlela zokufaka.